Arrimaha dallacaadda Apple Watch waxaa lagu hagaajin doonaa watchOS 8.4 | IPhone News
Arrimaha dallacaadda Apple Watch waxaa lagu hagaajin doonaa watchOS 8.4
Kariim Hmeidan | | Apple Watch
Maalmo ka hor nimankii ka socday Cupertino ayaa naga yaabiyay markii ay soo saareen nooca RC ee nidaamyada hawlgelinta ee soo socda. IOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4, tvOS 15.3, iyo macOS Big Sur 11.6.3, noocyo u badan tahay inay ku yimaadaan qaab nooca ugu dambeeya inta lagu guda jiro usbuucan, waqtigaas oo aan cusbooneysiin karno aaladahayada si aan awood ugu yeelanno inaan helno Dhammaan horumarinta Cupertino. Noocyo asal ahaan noo keeni doona hagaajinta cayayaanka sida midka aan maanta kuu keenno. watchOS 8.4 RC waxay saxaysaa dhibaatooyinka dallacaadda ee qaar ka mid ah Apple Watch ay soo bandhigayeen. Sii wad akhriska aan kuu sheegeyno dhammaan faahfaahinta.
Sida muuqata dhibaatadani waxay saamaysay kaliya isticmaalayaasha Apple Watch Series 7, waxay la kulmaayeen dhibaatooyin tan iyo watchOS 8.3 oo leh dajiyeyaasha qolo saddexaad, maahan charger-kii asalka ahaa ee Apple, inkasta oo mid ka mid ah astaanta... laakiin dhowr daqiiqo ka dib way joojisay shaqadii oo si cad ayay nooga tagtay "tuuray". iyo dhibka jira ma la iman dabaylaha Amazon "qiimihiisu" caadiga ah, dhibaatadu waxay sidoo kale la timid xajiyeyaasha-dhamaadka sare sida kuwa Belkin, iyo qaar xitaa lahaa dhibaatooyinka saldhigga rasmiga ah ee dallacaadda tufaaxa. Dhibaato u muuqata in ay ahayd software halkii ay ka ahaan lahayd dabaysha aan isticmaalnay.
ka sii deynta qoraalada ee nooca RC ee watchOS 8.4 ayaa ururin taas watchOS 8.4 RC waxay si gaar ah u hagaajisaa cillad sababi karta in qaar ka mid ah xajiyeyaasha Apple Watch ay shaqayn waayaan, taas oo ah, noocani wuxuu sixi doonaa dhibaatooyinkan. Ka dib markii la bilaabay musharraxa Siideynta ee nooca watchOS, waa inaan fiiro gaar ah u yeelan doonaa usbuucan maadaama soo bandhigida dadweynaha ay dhowdahay. Noocyo leh sheeko cusub laakiin taasi waxay noo keenaysaa sixitaanno badan oo khaladaad ah oo qaar badan oo idinka mid ahi noo soo sheegaan. Adigana, Wax dhibaato ah ma kala kulantay dabaylahaaga Apple Watch? Waanu ku akhrinay...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Arrimaha dallacaadda Apple Watch waxaa lagu hagaajin doonaa watchOS 8.4
samee Bilaha 4
Waa hagaag, waxaan haystaa taxanaha 5 waxaanan haystaa dhibaato isku mid ah tan iyo markii aan u cusbooneysiiyay watchOS 8. Waxaan rajeynayaa in lagu xallin doono cusbooneysiinta.
Waad ku mahadsan tahay maqaalkan guys, waxaan ku qaatay wakhti leh 3-in-1 saldhig lacag bixin ah oo aan ka soo iibsaday Amazon in ka badan hal sano ka hor oo aan ku dhawaaday inaan iska tuuro oo aan iibsado mid kale.
Fikrad ayaa muujinaysa taabashada HomePod: shaashadda taabashada ee ku hadasha Apple
Apple waxa ay diyaarisay barafka ugu weyn ee soo saarista dayrta